Girazi rakangwara kubva kuApple, iyo itsva patent inouya pachena | Ndinobva mac
Girazi rakangwara kubva kuApple, iyo patent nyowani inouya muchiedza
Ruben gallardo | | Rumo
Iyo itsva Apple patent inoonekwa panzvimbo. Zvisinei, tenda kana kwete, hachisi chinhu chakabatana nechimwe chigadzirwa chekambani iri pamusika. Iyo patent inosiya pfungwa nyowani mumhepo: a girazi rakangwara kuti pamusoro pekutibvumidza kuti tizviratidze pachedu, ingadai iinewo nzvimbo yakakodzera yekutiratidza ruzivo. Uye, tarisa: inogona kutarisirwa kuburikidza nekutarisa kwedu.
Pakupedzisira harisi timu rinotishamisa; pane kanopfuura kamwe chiitiko zvave zvichikwanisika kuona iyo isinganzwisisike pfungwa mune ino pfungwa. Chiri kunyatsotishamisa ndechekuti yaive Apple yaive nemvumo iyi yerudzi rwechigadzirwa. Asi ngatione kuti pfungwa iyi inei.
Sezvakawanikwa iDrop Nhau, mudziyo unomiririrwa mune yakanyoreswa patent pa Chikumi 14, nzvimbo iyi inogona kushanda segirazi pamwe chete nechiratidziro kuratidza ruzivo. Zvakare, chinonakidza ndechekuti pamusoro payo panogona kupatsanurwa uye kushanda munzira mbiri panguva imwe chete.
1 Nzira dzakasiyana dzekubata iyi Apple smart girazi
2 Zvinogona kushandiswa zveiyi Apple smart girazi
Nzira dzakasiyana dzekubata iyi Apple smart girazi
Zvichida chinhu chinonyanya kufarira, pamusoro pekuti Apple yaive inowona zano, ndechekuti chishandiso ichi chitsva chinogona kubatwa nenzira dzakasiyana. Sezvakatsanangurwa, mushandisi aigona shandisa maziso echiso, pamwe nemaoko nemaoko kana masaini nemusoro wedu. Ehezve, kune izvi iwe ungade kamera yakagadzirirwa pamberi. Uye isu tese takauya mupfungwa izvo zvinogona kutoonekwa pane iyo iPhone X: yayo Yechokwadi Kudzika kamera kushandisa Face ID tekinoroji.
Zvinogona kushandiswa zveiyi Apple smart girazi
Zvimwe zvinoshandiswa zvauya pachena. Izvi zvinogona kusanganisira iyo iPhone kana iPad, senzira yekuve nechiratidziro kumba - hofisi yako inogona zvakare kuve inzvimbo yakanaka yerudzi urwu rwemidziyo. kwatinogona kuratidza ruzivo runosvika panharembozha.
Saizvozvo, inogona kunge iri skrini yekunakidzwa nezviri mukati izvo Apple ichazopa mune ramangwana. Kana, ye Apple TV ine yakavakirwa-mukati skrini "Iyo yekupedzisira inonakidza kwazvo." Nekudaro, sezvazvinowanzoitika nemhando idzi dzepamutemo, hapana chinoratidza kana kuona kuti pfungwa idzi dzinozadzikiswa. Tichaona kana isu tine nhau mune ramangwana nezve rudzi urwu rwe smart screen.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Girazi rakangwara kubva kuApple, iyo patent nyowani inouya muchiedza
MacOS Yakakwira Sierra 10.13.6 Beta, Kuwanika, Microsoft Office 2019, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Munyori iAnovandudzwa zvakare neraibhurari nyowani uye zvigadziriso zvebug